के हो बिटुमिनको स्ट्यान्डर्ड ? कस्तो हुनुपर्छ ? – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ कर्पोरेट ∕ के हो बिटुमिनको स्ट्यान्डर्ड ? कस्तो हुनुपर्छ ?
आर्थिक दैनिक २०७८, साउन १५ १२:५७
बिटुमिनको मूल्यबारे प्रश्न गर्दा यतिबेला बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योगले प्रति मेट्रिक टन ७५ हजार छ सय रुपैयाँ मूल्य पर्ने जानकारी दिएको छ । तर, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले कमसल बिटुमिन नै प्रयोग गर्नेगरेको अध्ययनले देखाएको छ । जसका कारण राजधानीकै सडकको कालोपत्रे पनि छिट्टै उप्कने गरेका छन् । प्रयोग अघि बिटुमिन परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षण गर्दा कुन स्थानको तापक्रम, जमिनको बनोट आदि कस्तो छ र त्यो सडकमा कुन स्तरको बिटुमिन उपयुक्त छ भनी निक्र्यौल गरिनुपर्छ ।